တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၄ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၉ ဦးဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရှိ လမ်းမတစ်နေရာတွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ် လမ်းဖြတ်ကူးနေသူများအား နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စတန်ဘူလ်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တူရကီနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော အစ္စတန်ဘူလ်တွင် အားပြင်းသော အနောက်တောင်လေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်၌ ၄ ဦးအထိရှိလာကြောင်း တူရကီအစိုးရက ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရှိ လမ်းမတစ်နေရာတွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းကြား ဖြတ်သန်းသွားလာနေသူတစ်ဦးအား နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရာသီဥတုဆိုးဝါးသည့် အခြေအနေများကြောင့် နိုင်ငံသား ၁၉ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းအနက် သုံးဦးမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့၏ ဥရောပဘက်ခြမ်းရှိ Esenyurt ခရိုင်တွင် ပြိုကျသွားသောခေါင်မိုးများအောက်တွင် ပိတ်မိနေသဖြင့် အနည်းဆုံး လူ ၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်း မီဒီယာသတင်းများက ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းမြို့ရှိ အချို့နေရာများတွင် တစ်နာရီလျှင် ၁၃၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်နေသော အားပြင်းသည့်လေမုန်တိုင်းကြောင့် မော်တော်ယာဉ်များ ပျက်စီးခြင်း၊ အဝေးပြေးလမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသော ထရပ်ကားများ တိမ်းမှောက်ခြင်းနှင့် နာရီစင်ပြိုကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း Ihlas သတင်းအေဂျင်စီက ရေးသားထားသည်။
စည်ပင်သာယာအဖွဲ့များအနေဖြင့် ပြိုကျနေသော ခေါင်မိုး ၃၃ ခုနှင့် လဲကျနေသော သစ်ပင် ၁၉၂ ပင်ရှိကြောင်း သတင်းပေးချက်များ လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု အစ္စတန်လ်မြူနီစီပယ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကူးတို့လှေဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး ပယ်ဖျက်ကြောင်းနှင့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များစွာအား အခြားမြို့များသို့ ပျံသန်းရန် ညွှန်ကြားထားခဲ့သည်။
လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့် မျောပါသွားသည့် လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံအလံ တပ်ဆင်ထားသော ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းသည် ဥရောပဘက်ခြမ်း Avcilar ခရိုင်ရှိ Ambarli ဆိပ်ကမ်း၌ ဆိပ်ခံတံတားအား ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း NTV အသံလွှင့်ဌာနအရ သိရသည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူများသည်လည်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများအကြား Bosphorus ရေလက်ကြားအပေါ်ရှိ ခင်းထားသော တံတားများအား ဖြတ်သန်းချိန်၌ ခက်ခဲမှုရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပင်လယ်နက်နှင့် မာမရာပင်လယ်အကြားရှိ ရေလက်ကြားအား အသွား၊ အပြန် နှစ်ခုလုံး၌ ပင်လယ်ဖြတ်သန်းခွင့်အား ပိတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Update:4killed, 19 wounded in strong storm in Turkey’s Istanbul: governor’s office
Source: Xinhua| 2021-11-29 23:40:42|Editor: huaxia
ISTANBUL, Nov. 29 (Xinhua) — The death toll inapowerful southwest wind storm in Turkey’s largest city Istanbul on Monday increased to four, the Istanbul Governor’s Office said inastatement.
Media reports earlier said at least two people were killed when they were stuck under the smashed roofs in the Esenyurt district on the European side of the city.
The strait between the Black Sea and the Marmara Sea was closed to the sea traffic in both directions. Enditem
1- Pedestrians walk against strong winds onastreet in Istanbul, Turkey, on Nov. 29, 2021. The death toll inapowerful southwest wind storm in Istanbul on Monday increased to four, the Istanbul Governor’s Office said inastatement. (Xinhua)
2-3- A pedestrian walks against strong winds onastreet in Istanbul, Turkey, on Nov. 29, 2021. The death toll inapowerful southwest wind storm in Istanbul on Monday increased to four, the Istanbul Governor’s Office said inastatement. (Xinhua)